Xaaladda Mobile ee Mareykanka | Martech Zone
Xaaladda Mobilka ee Mareykanka
Talaado, Maarso 11, 2014 Jimce, Maarso 14, 2014 Douglas Karr
Isticmaalka mobilada ee macaamiisha ayaa cirka isku sii shareeraya. 74% kororku wuxuu kujiraa taleefannada casriga ah oo 79% ka mid ah Dukaameystayaasha Mareykanka ay ka baaraandegaan oo ay ka adeegtaan bogagga iyo barnaamijyada. Marka la gaaro sanadka 2016 dakhliyada barnaamijyada moobiilka waxay gaarayaan $ 46 bilyan. Si loo tirokoobo waxa isbeddelladan riwaayaddu uga dhigan tahay summadaha dadka ay ku dhaqan yihiin Isticmaal Isku soo wada duub faahfaahin muuqaal ah oo muujinaysa sida isticmaalka internetka moobiilku u beddelayo habka macaamiisha ula macaamilaan noocyada websaydhka.
Usablenet waxay awood u leedahay goobaha mobilada iyo khibradaha badan ee macaamiisha in ka badan 400 oo macaamiil ah oo ay ku jiraan kuwa badan oo ka mid ah tafaariiqda adduunka ugu sarreeya, safarka iyo noocyada adeegga.
Tags: sicir-bararkaisbeddellada dukaamaysiga fasaxafasaxyadaapps mobileiibinta mobiladawebka mobilefasaxyada wax iibsiga ee internetkaiibinta kiniinkaKiniinigawaqti ku qaatay